Ukutyelela iAsilah, kunxweme olusemantla eMorocco | Ukuhamba kwe-Absolut
Iikhilomitha ezingama-46 kumazantsi eTangier kunye ne-110 ukusuka eCeuta kukho isixeko esincinci saseMorocco esibe sesinye sezinto zokugqibela zabakhenkethi unxweme olusemantla emorocco: UAsilah, umboniso wezindlu ezimhlophe ezingafaniyo noluhlaza okwesibhakabhaka weAtlantic kunye nezitrato ezimema ukuba uzilahle kwihlabathi elitsha, umbala kunye nomthunzi omnandi nje.
1 UAsilah: yintoni iindonga ezikhuselayo
2 UAsilah: umhlaba ojikeleze iMedina
3 UAsilah, umhlaba oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe
UAsilah: yintoni iindonga ezikhuselayo
Njengezinye iindawo ezininzi ezigudle unxweme lwaseMorocco, uAsilah wayetyelelwe ngamaGrike namaFenike abhala phantsi ubukho bawo ngohlobo lweendawo ezahlukileyo ezinje ngeZilil, ezazisusela kwinkulungwane yesibini yeXesha Eliqhelekileyo. Kamva indawo leyo yayiza kuthathwa ngabaseCarthagini inkulungwane yokuqala ye-BC kwakuza kuhlala kuyo uBukhosi baseRoma, Ngubani oza kuyibiza ngokuba yiColonia Augusti Iulia Constantia Zilil (Augusta Zilil).
Kangangeenkulungwane, amaRoma ayenza esi sixeko saba sesaso de saphinde soyiswa kwakhona ngama-Arabhu ngo-712, eqala ixesha elitsha legolide apho u-Asilah azivumela ukuba agutyungelwe ngomtsalane edume ngawo namhlanje. Kwelinye icala, ukuma kwayo ngobuchule emantla eMorocco kwayenza indawo yokurhweba kubathengisi baseSpain nabama-Arabhu. . . kunye nesiPhuthukezi.
Ukukhawuleziswa kwegolide yaseSahara kukhokelele iPortugal yathabatha isixeko ngo-1471 yaza yasishiya phantse emva kwenkulungwane. Ngexesha lolawulo lwabo, amaPhuthukezi aphakamisa ezinye iindonga abomeleza ngazo u-Asilah kwaye namhlanje iye yaba yenye yezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi.
Emva kwemizamo eyahlukeneyo yokuphinda boyise, iSpain yathatha loo ndawo emva kwemanyano kunye nePortugal Inxalenye yoKhuseleko lwaseSpain kude kube ngo-1956 ngaphandle kohlaselo rhoqo lweedynasties ezahlukeneyo zaseMorocco iminyaka.
Namhlanje, u-Asilah utyhila onke amandla asembalini njengenye yeedolophu ezintle eMorocco.
UAsilah: umhlaba ojikeleze iMedina
Enye yeenzuzo ezinkulu uAsilah anazo xa etyelele kuyo ukufikeleleka kweMedina yayo, eyaziwa njengedolophu yakudala yazo zonke izixeko zaseMorocco ezibandakanya uninzi lwezikhumbuzo ezibalulekileyo.
Kwimeko ka-Asilah, xa unqumla iindonga zeMedina ukusuka emantla, ngakumbi kwicandelo elaziwa njenge UBab El Kasbah, Uya kubaleka ungene mosque enkulu, yomhlophe ococekileyo, okanye Inqaba yase-El Kamra, i-icon ka-Asilah enobume bayo bemitha engama-50 ilele kwiindonga ezihlebelayo kudala. Phambi kwayo, iZiko likaHassan II, elinemiboniso kunye neminyhadala yamazwe aphesheya, liba yindawo ephambili yenkcubeko yesixeko esikhupha umbala kunye nobuchule, njengoko ubona iisampulu zobugcisa basezidolophini ezinamacala athile esixeko.
Njengoko siqhubela phambili kwiMedina, siya kuthi kwakhona sibalekele kwi-coquette seZizwe U-Ibn Khaldun, ilungele ukulukuhlwa ziimarike ezincinci ezinje ngeNashia okanye iivenkile zaseLes Amis, apho zithengisa khona ukusuka kwizibane ukuya kumandongomane kunye neelekese zaseMorocco, okanye uzivumele uthathwe ziincasa ezinikezelwa kumathambeka, iivenkile zeti kunye neeresityu ezikule sikwere. Emva kweti epholileyo yamaMoor, akukho nto ingcono kunokukhwela kwenye ye amacandelo adumileyo kudonga oludala lwasePortugal: Borj Al Kamra, Esibonelela ngeyona mibono mihle yeso sixeko kunye nobukho bemikhono yamandulo kwezinye iindawo ezikumda weAtlantic.
UAsilah, umhlaba oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe
Ukulahleka ezitalatweni zeMedina yaseAsilah kuyonwabisa: iarches ekhusela amanye amacandelo, ii-facade apho umbala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe udibana neminye imibala okanye uxolo oluza ngohlobo lokutsha, olokuhlola iAtlantic ngasemva kweendonga ezikhusela imbali yakudala iindawo.
Amangcwaba kunye neMausoleum kaSidi Ahmed El Mansur Umzekelo omhle. Indawo ethe cwaka kumzantsi-ntshona weMedina apho kuphumla khona iintsalela zale nkokeli yaseSaadia, eyaphinda yoyisa isixeko emva kokulwa kwiDabi laKumkani abathathu, ngo-1578. Utyelelo olundilisekileyo lokuxhasa ukunyukela umbono weCaraquia, Ukusuka apho unokucamngca enye ye ukutshona kwelanga okuhle kunxweme lwaseMorocco Ukucofa intsalela yeendonga.
Kwaye iilwandle? Sukuba nexhala, kukwakho naseAsilah kwaye zintle futhi. Emantla uyakufumana ulwandle oluncinci ecaleni kwezibuko kunye neCala de los Cañones, ezilungele ukuthatha uhambo lokuphumla kunye nokuhlala phantsi ubukele ukutshona kwelanga. Ukuba ujonga iilwandle ezibanzi, Unxweme lwaseAsilah Inabela kwidolophu yaseBrief, ebekwe kwiikhilomitha ezili-10 kude.
ICuevas Beach, emazantsi eAsilah.
Ngokubhekisele emazantsi, Unxweme lwemiqolomba, Iikhilomitha ezi-6 emazantsi esixeko, yeyona idumileyo, ime phakathi koncedo olunqabileyo lwamawa kunye namatye, ngelixa ulwandle iSidi Mghait lulele esiphelweni somnatha weendlela ezingagangathwanga uvuza abo beza kukhangela amanzi aluhlaza kwaye iisanti zegolide kule ndawo yaseMorocco.
Ukulahleka eAsilah kunye nomtsalane wayo awuyi kukuthatha ngaphezulu kosuku, ukuze ibe yindawo efanelekileyo yokubaleka kukhenketho lonxweme olusemantla eMorocco okanye njengolwandiso kutyelelo lwaseTangier ekufutshane.
Ukhe wamndwendwela uAsilah?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukutyelela iAsilah, kunxweme olusemantla eMorocco
Izitya eziqhelekileyo zommandla weAndes
Eyona ndawo yamachibi endalo eMadrid